Real Madrid Oo Shaacisay In XIDDIG Saddexaad Oo Muhiim Ahi Uu Ka Maqnaanayo Finalka Spanish Super Cup - GOOL24.NET
Real Madrid Oo Shaacisay In XIDDIG Saddexaad Oo Muhiim Ahi Uu Ka Maqnaanayo Finalka Spanish Super Cup
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa shaacisay in uu ka maqnaanayo ciyaartoy kale oo muhiim ah kulanka Spanish Super Cup ee Axadda ay ku ballansan yihiin Athletic Bilbao.
Real Madrid ayaa hore u xaqiijisay in labada difaacyahan ee David Alaba iyo Dani Carvajal ay seegi doonaan finalka, kaddib markii ay dhaawacyo iyo Fayraska Korona ay ku kala dhaceen. Alaba ayaa hore u seegay ciyaartii Barcelona ee semi-finalka hase yeeshee Carvajal ayaa shalay la xaqiijiyey in uu ku dhacay Fayraska Korona.
Carlo Ancelotti oo ay labadan ciyaartoy ka maqan yihiin ayaa waxa haddan lagu wargeliyey inuu xisaabtiisa ka saaro xiddiga reer Spain ee Marco Asensio oo dhaawac soo gaadhay, isla markaana aan qayb ka noqon tababarkii Jimcihii iyo maanta oo Sabti ahayd.
Real Madrid waxay sheegtay in Marco Asensio ay baadhitaan ku samayn doonaan marka ay kooxdu ku laabato magaalada Madrid maadaama ay hadda ku sugan yihiin Sucuudiga oo uu ka dhacayo tartanka Spanish Super Cup.
Wararka hordhaca ah ayaa waxay sheegayaan in Asensio uu garoomada ka maqnaan karo illaa laba usbuuc, waxaana booskiisa uu Ancelotti u isticaali doonaa Rodrygo Goes ama Eden Hazard inkasta oo xiddiga reer Belgium aanu ahayn dookha koowaad oo uu da’yarka Brazil ka horreeyo.
Los Blancos ayaa niyad-samaan badan ka muujisay in Asensio uu soo laaban doono ka hor ciyaarta PSG ee wareegga 16ka Champions League ee badhtamaha bisha February, iyadoo dhaawaciisuna uu yimid kaddib kulamo uu bandhig wanaagsan samaynayay.